Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO oo ka qeyb galay shir sanadlaha jaaliyada S. Ogaadeenya Switzerland
Gudoomiyaha JWXO oo ka qeyb galay shir sanadlaha jaaliyada S. Ogaadeenya Switzerland
Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya Mudane Maxamed Cumar Cusmaan oo uu wehliyo Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arrimaha Bulshada (HAAB) Mudane Maxamed Cabdi yaasiin Diirane ayaa ka qeeyb galay shir sanadlaha jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya ee Switzerland maalintii Sabtida 30ka Juun 2012.
Shirkan sanadlaha ah oo ay ku xaadirsanaayeen qeeybaha kala duwan ee jaaliyada sida Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogaadeenya (OYSU) iyo ururka haweenka ayaa waxaa sidoo kale lagu marti qaaday fanaanka weeyn Cabdi Baadil Ibraahim iyo ururo daneeya qadiyada Ogaadeenya.
Maamulka jaaliyada ayaa ka warbixiyay hoowlaha u qabsoomay sanadkii tagay sheegayna in dhamaan qorshe sanadeedkii jaaliyada si wanaagsan u fulay isla markaana sanadkan la rajeeynayo in uu ka waxtar fiicnaado sanadkii tagay. Waxaa goobta lagu soo bandhigay dhibaatada aan horey loo arag oo uu gumeeysiga itoobiya iyo gacan yarayaasiisha ka geeysanayaan Ogaadeenya iyo sida ay waajibka u tahay in shacabka laga badbaadiyo dhibaatooyinkaa.
Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya (JWXO) Mudane Maxamed Cumar Cusmaan oo shirka khudbad qaayo leh oo meelo badan taabaneeysan ka jeediyay ayaa xusay in shacbiga Ogaadeenya uu maanta bisal yahay is la markaana dib danbe u ogalaan doonin in xuquuqdooda aasaasiga oo ay xaqa aayo ka talinta ka mid tahay lagu tunto gumeeysiguna la quman tahay in uu arrintani garwaaqsado hadii kale ayuu yiri Gudoomiyuhu dharaar cad ayaan xuquuqdeena soo dhacsaneeynaa. Gudoomiyaha ayaa sheegay in JWXO tahay xisbi siyaasadeed oo lagu qasbay in ay hubka qaadato si jiritaanka shacbiga iyo dalka Ogaadeenyaba u sugto.
Gudoomiyaha JWXO Admiral Cusmaan ayaa hoosta ka qaxiiray in gobolada Ogaadeenya dhamaan ciidamada JWXO ka wada hoowl galaan iyagoo ku qasbay ciidamada gumeeysiga in ay qortaan miciina bidaan maleeshiyo diin iyo iimaan laheeyn oo xasuuqaya ehelkooda. Gudoomiyaha ayaa u hambalyeeyay ciidamada, shacabka gudaha iyo jaaliyadaha dibada doorka muhiimka ah ee ay ka qaadanayaan si loo soo afmeero gumeeysiga Ogaadeenya ka jira. Run ahaantii ayuu yiri Gudoomiyuhu waxaa maanta taliska gumeeysiga quus ka taagan yahay in wadamada dibada u soo tuugsi tago beentii uu ku dawarsan jirayna dibadaha la yimaado iyadoo gudahana gumeeysiga ku guul dareeystay in qorshayaalkiisa siduu doono uga fuliyo Ogaadeenya.
Gudoomiyaha JWXO ayaa xusay in itoobiya ka dalbatay dowlada Kenya in ay na dhexdhexaadiso arrintaa oo waafaqsan dalabka ONLF oo go’aansatay hadii wada hadal lagalayo in wadan sedexaad iyo heeyadaha caalamiga ah ee khilaafaadka xaliya ku lug lahaadaan. Wada hadalo daacad ah marnaba ma’aanan diidin ayuu hadalkiisa sii raaciyay isagoo xusay in wada hadal uusan aheeyn heshiis hase ahaatee ujeedadanadu tahay xaqiijinta hadafka boqolaalka kun u shahiideen tan iyo markii Ogaadeenya gashay gacanta gumeeysiga oo ah xornimi taam ah maadaama Ogaadeenya tahay marka shuruucda caalamiga la’eego wadan gumeeysi ku hoos jira.
Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arrimaha Bulshada (HAAB) Mudane Max’ed Cabdi Yaasiin Diirane ayaa sidoo kale is na khudbad shirka ka soo jeediyay. Mudane Diirane ayaa sheegay in halganka Ogaadeenya ka socda yahay mid waajib Islaami ah Soomaali iyo kheeyrkeedba tahay in ay taageeraan xaqa shacabka Ogaadeenya u leeyihiin in ay masiirkooda u tashadaan. Gudoomiyaha HAAB ayaa xusay in JWXO u taagan tahay hor istaaga gumeeysiga Soomaalida Afrikada Barina u tahay dan in itoobiya iyo khatarteeda laga fogeeyo taas oo ku iman karta kaliya iyadoo taageero maal iyo maadi ah ba la garab istaagaan walaalahooda nafta u huray sharafta iyo jiritaanka isirka Soomaaliyeed. Mudane Diirane ayaa sheegay in laga feejignaado la iskana qabto kuwa la ina midabka ah ee gumeeysiga soo dirsaday ee jiritaankooda lidku ku ah si u tashwiish galiyaan midnimada umada isuguna dayaan in ay ka leexiyaan shacabka hadafka la higsanayo.
Madaxa hogaanka HAAB ayaa xusay in halganka JWXO gaamuray marayana meelo xasaasi ah iyadoo dunida garwaaqsatay xaqnimada iyo hab dhaqanka wanaagsan ee jabhada jaaliyada dunida daafaheedana looga baahan yahay in ay waxtarkooda kor u qaadaan. Mudane Diirane ayaa hoosta ka xariiqay in maanta JWXO caalamka irdaha u furay waxa la hadal hayaana tahay maxaa xal ah taas oo ku timid dhiiga iyo isku duubnida shacabka gudaha iyo dibadaba.
Shirka oo habsami leh u dhacay ayaa waxaa fanka iyo suugaanta dhaqanka inoo ah ku soo bandhigay fanaanka weeyn Cabdi Baadil iyo koox gabdho iyo wiilal ah oo OYSU Switzerland ka tirsan.
Email : communauteogaden@net2000..ch